Wakiilka Douglas Costa oo xaqiijiyey xiisaha xiddigan ee Kooxda Manchester United – Gool FM
Wakiilka Douglas Costa oo xaqiijiyey xiisaha xiddigan ee Kooxda Manchester United
(Turin) 10 Sebt 2019. Wakiilka Giovanni Branchini ayaa sheegtay in Kooxda Manchester United ay ku guul darreysatay isku daygeedii ay kula soo wareegeysay weeraryahanka naadiga Juventus ee Douglas Costa intii lagu jiray suuqa kala iibsiga xagaaga.
Costa ayaa ku dhibtooday inuu qaato doorka ku bilaabashada safka hore intii lagu guda jiray labadii sano ee uu joogay Turin, isagoo shan gool dhaliyey 27 oo uu ku bilowday safka hore iyo halka 23 kulan uu bedel uu ku soo galay kulammada horyaalka Serie A.
Si kastaba ha ahaatee, inkastoo Man United la wariyey inay xiiso u qabtay xiddiga reer Brazil ka hor bilowga xilli ciyaareedka, Branchini ayaa sheegay in kooxda haysata horyaalka Serie A aysan dooneynin inay iibiyaan 28-sano jirkaan.
Branchini ayaa u sheegay Wargeyska Daily Mail: “Xiisaha Manchester United wuxuu ahaa mid xooggan, waa koox waligeed xiisayneysay ciyaaryahanka reer Brazil, ma ahayn kooxda kaliya England, laakiin waxa ay xaqiiqdii ahayd kooxda ugu firfircoon safka loogu jiray Douglas Costa.”
“Douglas wuxuu qabay dhibaatooyin caafimaad oo aan la tirin karin, xilli ciyaareedkii hore marar badan ayuu dhaawac ahaa, wuxuu doonayaa inuu ku soo laabto xirfaddiisa sare kaddib markii uu istaagay, dareenka ugu fiican ee erayga, wuxuu awoodaa inuu la qabsado wax walba.”
“Horyaalka Premier League waa horyaal qurux badan, laakiin hadda Man United waxay ku fashilantay isku daygoodii ay kaga dhaadhicineysay Juventus inay iska iibiso isaga, ciyaaryahanku waxa uu ku sii nagaaday Turin waana Horyaal.”
Costa ayaa weli haysta heshiis saddex sanadood ah oo kaga harsan qandaraaskiisa.